Taangiga Bitumen, Dhirta Bitumen Emulsion, Boiler saliidda Diathermic - Jianeng
Qaabka kuleyliyaha haanta saqafka sare ee ay soo saarto shirkadeena ayaa loo qeybin karaa: kuleylka saliida kuleylka, kuleylka korantada iyo kuleylka tooska ah ee gubta. Mugga waxaa loo habeyn karaa iyadoo la raacayo shuruudaha macaamilka, wuuna geli karaa gulinta weelka. Noocyo kala duwan oo ah isku-darka kuleylka iyo aaladda isku-dhafka ah waxaa loogu talagalay loogu talagalay booyadda bitumen oo leh ujeedooyin kala duwan, si loo haqabtiro baahiyaha xaaladaha shaqada dhabta ah. Marka dhowr taangiyadood oo bitumen ah la isticmaalo waqti isku mid ah, dhuunta hore ee haanta ayaa la rakibi karaa si loo fududeeyo rakibidda goobta shaqada. Dhamaan dhuumaha oo dhanna horay ayaa loogu rakibay warshadda. Xaaladaha caadiga ah, wax isbedel ah looma baahna shaqada, si aan u helno goobta si aan u ilaalinno daacadnimada tuubooyinka. Haddii taangiga bitumen-ka uu ubaahanyahay gaaska isku habeyn kara, waxaa loo sifeyn karaa si waafaqsan shuruudaha macaamilka.
Waxbadan ka baro Nala soo xiriir
Qaabka kuleyliyaha haanta asphalt ee taangiga ay soo saarto shirkadeena ayaa loo qeybin karaa: kuleylka kuleylka saliida kuleylka iyo kuleylka korantada. Mugga waxaa loo habeyn karaa 20 m³ ilaa 2000 m3 iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka. Noocyada kala duwan ee dhuxul kuleylka iyo aaladaha isku-dhafka ah waxaa loogu talagalay loogu talagalay haamaha bitumen-ka leh ulajeedooyin kala duwan si ay u buuxiyaan shuruudaha adeegsiga duruufaha shaqo ee dhabta ah. Haanta asphalt ee toosan waxaa lagu rakibi karaa iyadoo leh heerka dareeraha elektiroonigga ah iyadoo la raacayo shuruudaha macaamilka si loo garto kontaroolka otomatiga ah ee heerka dareeraha sare iyo kan hoose. Haddii taangiga bitumen-ka uu ubaahanyahay gaaska isku habeyn kara, waxaa loo sifeyn karaa si waafaqsan shuruudaha macaamilka.
Nooca haanta bitumen-ka weelka ee ay soo saarto shirkadeena ayaa ku habboon keydinta bitumen iyo gaadiid. Waxaa si toos ah loogu qaadi karaa dhinaca badda iyadoo la raacayo nooca rarida weelka, oo leh mugga ugu badan oo ah 55 mitir cubic, oo lagu abuuri karo laguna rakibi karo agititir. Nooca haanta bitumen-ka weelka ayaa aad ugu habboon dhaqaaqa iyo qaadista asphalt. Nooca haanta bitumen-ka weelka waxaa lagu samayn karaa kuleylka lagu hago kuleylka saliida, kuleylinta korantada ama kuleylka tooska ah ee gubashada. Markii la adeegsado haamo badan isla waqti isku mid ah, dhuumaha hore ee haanta waa la habeyn karaa oo lagu rakibi karaa si taangiga oo dhan looga dhigo mid aad u habboon marka la kala dirayo goobta.
Qurxinta bitumen-ka ee ay soo saarto shirkaddayadu way fududahay in la shaqeeyo oo la rakibo. Taangiyada ayaa loo qaybiyaa laba qol, qaybta kore waxaa lagu qalabeeyay dhuxul kuleyl ah, nidaamka hawo-mareenka ayaa ku riixaya baaldiga bitumen-ka midba, bitumen-ku wuxuu ku dhalaalaa kuleylka. Saliidda kuleylka hoose waa la kululeeyaa si ay u sii waddo dhalaalidda bitumenka, ka dibna waxaa loo daadgureeyaa isticmaalka. Qurxinta bitumen-ka ayaa loo galin karaa weelka loogu talagalay gaadiid. Shirkadeena sidoo kale waxay soo saartaa aalad (dhalashada) aaladda dhalaalaysa, xarkaha korantada loo yaqaan 'cantilever craneing', hawlgal sahlan, tayo sare leh.
Silo kululaynta kulul ee ay soo saartay shirkadeena ayaa loo qaybiyay nooca ilaalinta deegaanka iyo nooca caamka ah. Waxaa lagula jaan qaadi karaa 80t / h-480t / h geedo qasacadaysan, mugga sidoo kale waa la dejin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka. Cabbirka ah 160 tan iyo wixii ka hooseeya ayaa geli kara galka weelka. Shirkaddayadu waxay si joogto ah u wanaajisay habka waxsoosaarka kaydinta kulul ee silo sanado badan, oo leh waxqabad lagu kalsoonaan karo. Siinka keydka kulul ee bay'ada loogu talagalay ayaa si weyn u buuxiya shuruudaha ilaalinta deegaanka.
Warshad Bitumen Emulsion
Warshadda bitumen emulsion ee ay soo saartey shirkadeena ayaa leh hal qaab oo saliid ah, hal haanta biyaha kulul, laba taangiyada iskudareysan ee dareeraha ah, hal taangiyada bitumen, hal haanta bitumen emulsion (adeegsiga kala guurka), hal bambo xawaaraha bitumen lagu hagaajin karo, matoorka xawaaraha dayactirka , hal millin, hal bambo gureed sunta laga saaro iyo hal qol kontaroolo koronto ah. Iyo sidoo kale dhuunta kululaynta saliida kuleylka, tuubbada faafinta bitumen, dhuumaha isu gudbinta emulsion. Warshadda emulsion ee Bitumen waxaa loo qaybiyaa laba nooc: full-automatic iyo semi-automatic. Kuwa si buuxda otomaatiga u ah ayaa ka sifeeyey emulsifier-ka, iyo habka mitirka kala-goynta, si toos ah u dhigma emulsion-ka iyo xirmooyinka qumbuulka. Hawshu waa mid fudud, fududahay in la shaqeeyo, fududahay in wax la barto oo la fahmo.
Shirkadda 'SBS Polymer' waxay wax ka beddeshay bud-dhigga bitumen-ka ee ay soo saarto shirkadeena waxay ku dhejisan tahay naqshadeynta mobilada, taas oo aad ugu habboon rakibaadda iyo kala-baxa. Haanta isku-dhafka ah waxaa ku qalabeysan xawaaraha xawaaraha sare ku socda si looga fogaado isku-filnaan la'aanta ku-habboon sbs iyo bitumen. Iyadoo aan barar horay loo helin, waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la shiido iyadoo la quudiyo. Santamka SBS Polymer wax laga badalay ee loo yaqaan 'bitumen pant' waxaa loo qaybiyaa laba nooc: mid iskiis ah iyo mid iswada ah. Warshadda tooska ah ee PMB waxaa lagu miisaamayaa mobiil miisaaman oo si sax ah loogula egyahay sbs iyo bitumen. Nidaamka xakamaynta kumbuyuutarka ayaa kormeeri kara heerka wax soo saarka waqtiga dhabta ah.
Foornada kululaynta hawo kululeeyaha hawo-soosaarka ee ay soo saarto shirkadeena ayaa loo qaybiyaa nooca caadiga ah iyo nooca hawada kulul. Gubashadu waxay noqon kartaa saliid fudud, gaas dabiici ah ama gaas saliid ah. Kuleylka nooca hawada kulul wuxuu u isticmaalaa kuleylka haraaga ah ee gaaska faleebka si uu u kululeeyo hawada gubashada, taasoo yareyn karta heerkulka gaaska gaaska, sidaa darteed kuleylka kuleylka gaaska gaaska waxaa loo adeegsan karaa 7%, sidaa darteed hufnaanta kuleylka ayaa ah 90 %.
Wuxi Jianeng waxaa la asaasay 1999. Waxay leedahay 24,000 mitir murabac oo laba jibaaran, 38.28 milyan yuan oo ah caasimada diiwaangashan, in kabadan 20 farsamoyaqaan iyo 100 shaqaale.
Wuxi Jianeng waxay ku takhasustay soo-saarka qalabaynta taakuleynta geedka qasidda. Macaamiisha muddada fog iskaashatada waxaa ka mid ah LINTEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO iyo Tanaka.
Wuxi Jianeng waxay ku hawlanayd sameynta qalabka mashiinada naqshadeynta iyo soo saarida in kabadan labaatan sano. Iyada oo la raacayo waxqabadka sheyga, waxay heshay tiro ka mid ah shatiyadaha hal-abuurka ah iyo rukhsadaha moodellada Utility, kuwaas oo ay ku heleen ammaan wadajirka ah ee warshadaha.
Haangyaha tooska ah ee loo yaqaan 'bitumen tank' ee XCMG
Haangyo toosan bitumen loogu talagalay NFLG
Silo kulul oo loogu talagalay AMMANN
Haangyaha toosan bitumen ee AMMANN
Silo kaydinta kulul oo loogu talagalay Lintec
Taangiyada bitumen toosan ee AMMANN
Taangyaha Tooska ah ee Bitumen ee D&G
Haangyaha tooska bitumen-ka ee D&G 2
Xirmooyinka Kaydinta Bolt, shinida MILMA Qalabka , Asphalt MILMA Qalabka , Small Gold MILMA foornada , Drumn Melting Unit", Mobile Asphalt Batching Station Lby1000 (80t / H) , Dhamaan Alaabada